Front Page | Tech Fun Myanmar
You can opt for dedicated platforms from the advantages related to shared surfaces, resources and equipment. LEARN MORE We are providing
high value-added IT services from Myanmar. You can opt for dedicated platforms from the advantages related to shared surfaces, resources and equipment. LEARN MORE We are mainly focusing
on System Integration Service, IT Education Service, and Application Service. You can opt for dedicated platforms from the advantages related to shared surfaces, resources and equipment. LEARN MORE We can make
your strategic IT system by our high tech and teamwork.
Equality Myanmar has been postponed all the activities from 30 March all the staff have been working from home according to the request of the government.
မြန်မာနိုင်ငံ IT လောက၏ ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခု
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို. အခြေစိုက် Tech Fun စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုမှ ကျွန်တော်တို့၏Tech Fun Myanmar ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီခွဲ တစ်ခုအဖြစ် စတင်တည်ထောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီဟာ ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်သာမက ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းလုံးအတွက် အရည်အသွေးပြည့်မှီပြီး အသုံးတည့်သည့် ကျွန်တော်တို့ ၏ ကိုယ်ပိုင် application ပေါင်းများစွာကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဟာ Java , Andriod , PHP အစရှိသည့် နည်းပညာများကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သော အိုင်တီအင်ဂျင်နီယာများစွာဖြင့်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခြားသော ဖွံဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေလိုပဲ အလားအလာကောင်းတွေ များစွာရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုလို့ ယူဆထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ မြန်မာဓလေ့ ၊ မြန်မာ့ထုံးစံ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတို့ကို နှစ်သက်သူတွေ ဖြစ်ပြီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ. စီးပွားရေး အပြောင်းအလဲကို ခေတ်သစ်အိုင်တီနည်းပညာက အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မယ်လို့ အပြည့်အဝ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ကျွန်တော်တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ. အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စဉ်ကြီးမှာ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိပြီး ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းတဲ့ application တွေကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ မြန်မာ့လူအဖွဲ့အစည်း ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်ဖို့ ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Development Service for companies in developed countries
Development Service for companies in Myanmar
Web system (Java, PHP, Python)
Smartphone Apps (Android, iOS, Flutter)
Java Basic Course
Java Web App Course
Own Product & Service
StudySmile (Cloud e-Learning Service)
HRM Smile (On-premises HR System for companies in Myanmar)
Now changing asacloud service
Speak Myanmar (Learn commonly used Myanmar (Burmese) phrases)
TFMM’s own client in Myanmar
Flight Booking System (Java, Android, iOS)
Team Flow Myanmar
Communication App for Emotional Support (Flutter)
Lotus Bridge Drive
Management tool for vehicle and related products sales
(Java, Spring Boot, Mybatis)
Maps & Navigation ridesharing application with easy and convenient booking.
(Android, Java, Spring, Mybatis)
On-premises and Cloud HR System
for companies in Myanmar
(Java, Spring, Mybatis)
Learn to speak Myanmar with this great collection
of phrases. (Android, iOS)
Tech Fun Myanmar Co., Ltd.
Tech Fun Corporation (Tokyo, Japan)
Tatsuya Kasai (Managing Director)